HOTSELLING FTEMPORARY METALLIC TATTOO, Fekitori PRICE-Tattoo / Ziso mumvuri zvimiti-Shanghai HUIZI digital
Imba>Products>Tattoo / Ziso mumvuri zvinamirwa
HOTSELLING FTEMPORARY METALLIC TATTOO, DZIDZO YEMAHARA
Pepa rekutamisa mvura, inki, PET firimu, adhes
ndarama yenguva pfupi
Zviuru Zvisarudzo Zvinopihwa
1pc / mud bhegi
Ganda, Ceramic, Matala, Girazi ect
Yechinguvana tattoo Magadzirirwo
zita 2015 Idzva yesimbi yegoridhe tattoo yenguva pfupi teki, simbi tattoo zvita
zvinhu tranfer pepa + inki inotumirwa kubva kuEU + glue yakatorwa kunze kubva kuKorea + PVC inodzivirira firimu
Kukura (m * m) 151 * 202mm / 6 * 8.5inch, tinogona kuita chero saizi inodiwa newe
Nguva yekupedzisira 4-6days zvakafanana.
MOQ 500pcs / dhizaini (yedu dhizaini dhizaini) 1200pcs / dhizaini (maitiro ekugadzira)
Yechinguva tattoo Kutakura
chiputiriso zvakajairika i1pc / mud bhegi, 1200pcs / ctn. batanidza mimwe macheke marongedzi, Pls tarisa kana paine kufarira.
Yechinguva tattoo Kubhadhara uye Kuendesa
mubhadharo T / T, Western Union, Paypal
chinhu chechitoro: 1-2days mushure mekubhadhara.
Tsika: 7-10days mushure mekubhadhara.
Dhirivhari Port Shanghai / NingBo
Shipping Kuzvifambisa negungwa kana Express Dhirivhari (TNT, DHL, EMX, UPS, FEDEX, DHL… nezvimwewo)
Tinogona kutumira 6-7pcs inopisa tattoos uye mamwe ekutakura samples kwauri, Pls taura neni kuti uwane iwo mamiriro acho :)
STOCK TATTOO MADZIDZO
Tine anopfuura 140 masitoko ekugadzira, Pls inzwa wakasununguka kuonana neni kuti uwane mamwe masitoko ezvigadzirwa :)
Q1: Uri fekitori?
A: Hongu, isu tiri fekitori, asi kwete fekitori chete, sezvo isu tine timu yekutengesa, vagadziri vega, imba yekuratidzira, inogona kubatsira vatengi kusarudza kuti ndezvipi zvigadzirwa zvavanosarudza, uye kubvunza kwako kwese kuchapindurwa mukati maawa makumi maviri nemana.
Q2: Unogona kunditumira yako yese katalog uye yemutengo runyorwa?
A: Sezvo isu tine zvinopfuura zviuru zvezvinhu, kunyangwe chinhu chimwe chiine hukuru hwakasiyana uye mapakeji, zvakanyanyisa kuoma kwatiri kuti tikutumirei yedu yese katarogu uye mutengo wemutengo iwe. Ndokumbira undizivise izvo zvinhu, saizi uye pasuru iwe yaunofarira, kuti tikwanise kukupa iwe rondedzero yemutengo iwe yaunoda kuti ureve zvako.
Q3: Unogona kunditumira mimwe sampuli?
A: Tinogona kupa emahara sampuli yako ongororo, asi yemuenzaniso kuendesa mutero kana iwe uchifanira kubhadhara.
Q4: Unogona kugadzira zvigadzirwa zvangu here?
A: Hongu, tinogona, ply kuratidza zvigadzirwa zvako kumutengesi wedu kutanga.
Q5: Ndeipi yako Nguva yekuendesa?
A: Kazhinji nguva yekuendesa iri mazuva gumi nemashanu-mazuva makumi matatu. Tichaita iko kuendesa nekukurumidza sezvinobvira nehunhu hwakavimbiswa.
Q6: Ndeipi iri nyore nzira yekubhadhara?
A: L / C, T / T, PayPal, Western Union uye Escrow zvinogamuchirwa, uye kana iwe uine zano riri nani, ndapota inzwa wakasununguka kugovana nesu.
Q7: Ndeipi nzira yekutakura ingave iri nani?
A: Kazhinji tinokurudzira kuita hurukuro negungwa izvo zvakachipa uye zvisina njodzi. Zvakare isu tinoremekedza ako maonero eimwe yekufambisa futi.
Q8: Tinogona here kushandisa yedu yekutumira mumiriri?
A: Hongu, unogona.Takanga tashanda pamwe nevazhinji vanofambisa mberi.Kana uchida, tinogona kukurudzira vamwe vanoendesa mberi kwauri.
Q9: sei kudzora mhando?
A: Tine yedu yega QC department, yedu QC ichaongorora zvese zvinhu isati yarongedza uye panguva yekurongedza.
Wholesale zvipikiri kuputira zvinoputira Asiri-kune chepfu mbambo tsvimbo mbambo art
OEM Fashoni Yechinguva Chemuviri Tatoo, yakakwirira mhando tattoo sticker
Japan Nail sticker Tsambo Inoputira mbambo art yekushongedza tsvimbo
Wholesale inotengesa inopisa zvipikiri inoputira pepa rinodhinda zvipikiri zvemukati zveMukadzi
Wholesale fekitori mutengo HUIZI semicured gel chipikiri chinamirwa
Isiri-Inotyisa nyowani semi yakaporeswa gel mitsetse Shanghai HUIZI yakawanda
Kupisa kutengeswa Shanghai HUIZI Isina-chepfu Kisimusi gel zvipikiri zvimiti / warp
2021 Nyowani Kupisa Kutengesa Nail Polish Stickers, 16pcs / mitsetse Nail Kuputira, Glitter Nail Art Mutengesi
Solid color nzara chinamirwa & zvisarudzo zvevasikana nyowani dhizaini